Abavelisi bokhathalelo lobuso | KwiChina Abakhathaleli bobuso abaxhasi kunye nefektri
Aloe vera ubuso toner
I-Aloe vera iqulethe i-polysaccharides kunye neendidi zeevithamini kulusu lomntu isondlo esifanelekileyo, wondle icandelo lomnqamlezo lamagqabi e-aloe vera, mhlophe.
Iingxaki zolusu ezibangelwa kukungabikho kwamanzi emzimbeni azikho lula njengokomisa. Phantse zonke iingxaki zolusu zinento yokwenza ne-hydration kunye nokugcinwa.
Njengoko sonke sisazi, i-amino acid yokucoceka kobuso yinto yokucoceka kobuso okuqhelekileyo, iqulethe izithako ezahlukeneyo zokhathalelo lolusu, inokucoca ulusu lobuso ngokufanelekileyo, iphucule imeko yolusu, yamkelwe ngokunzulu ngabantu.
Umgubo omhlophe, ungonzakalisi ulusu, usetyenziswe ngakumbi ekuchukumiseni ukukhanya ezinye, izinto zokuthambisa, zingasetyenziswa njenge-sunscreen ebonakalayo ...
I-hyaluronic acid ubuso bebuso
Ukungabikho kwamanzi kwesikhumba kuya kukhokelela kwimibimbi kunye nokuguga kolusu. Kukhathalelo lolusu, i-hyaluronic acid toner yimveliso yobuhle yendalo ethambisa kwaye ihambisa amanzi, enokuwenza mhlophe kwaye ukhanyise amabala.
Ebusweni, kunokuvakala ukuba iyadibana nolusu, yenza ulusu lukhanye kwaye luqaqambe, luvuse iiseli zokulala, lwenze ulusu lube namandla kwaye luthambe, lunokuxhathisa ngokufanelekileyo ukukhula kwemibimbi, kuthintele ukuveliswa kwe-melanin , thintela ubumnyama kunye namachaphaza amnyama, kwaye ukhokele ulusu oluqaqambileyo nolucacileyo ngengqondo yokukhanya.
Ingcinezelo ebandayo yezonyango inokwenza i-capillary constriction yendawo, inciphise ukuxinana kwendawo, inciphise ubuntununtunu kwincam yomthambo kunye nokuthomalalisa iintlungu, kupholise kwaye kunciphise umkhuhlane, kunciphise ukuhamba kwegazi lendawo, kuthintele ukudumba nokusasazeka kwamanzi.